भोजपुरमा पहिचानविरोधी एमालेलाई एक्लाए | संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost
भोजपुर, १७ जेठ । दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोजपुर जिल्लामा संघीय समाजवादी फोरम, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच तालमेल गरिएको छ ।
भोजपुरका नौ स्थानीय तहमध्ये टेम्केमैयुङ गाउँपालिका, साल्पासिलिछो गाउँपालिका, हतुवागढी गाउँपालिका र रामप्रसाद राई गाउँपालिकामा तालमेल गरिएको छ ।
पहिचान र समानुपातिक समावेशी नीतिप्रति अनुदार रहँदै आएको नेकपा एमालेलाई एक्लाउदै तीन दलबीच तालमेल गरिएको हो ।
टेम्केमैयुङ गाउँपालिका अध्यक्षमा रामसिंह राई
टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा संघीय समाजवादी फोरमका रामसिंह राईलाई साझा उम्मेदवार बनाइएको छ । यस गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र समाजवादी फोरमबीच तालमेल गरिएको हो ।
टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा सरोज बस्नेतलाई उम्मेदवार बनाइएको छ । उनी नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका हुन् । माओवादी केन्द्रलाई भने वडा तहमा समेटिएको समाजवादी फोरम भोजपुर जिल्ला समितिका अध्यक्ष आशकुमार राईले बताए ।
साल्पासिलिछो गाउँपालिका अध्यक्षमा महेश राई
साल्पासिलिछो गाउँपालिकामा भने हाल कांग्रेस र समाजवादी फोरमबीच मात्रै तालमेल गरिएको छ ।
यस गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कांग्रेसबाट महेश राईलाई उम्मेदवार बनाइएको छ । उपाध्यक्षमा भने समाजवादी फोरमका वीरकुमार राईलाई उम्मेदवार बनाइएको छ । वीरकुमार राई शिक्षक हुन् । दुई दलबीचको तालमेलबाट चुनावमा विजयी हुने सम्भावना रहेकाले शिक्षकबाट राजीनामा दिएर उनी उम्मेदवार बनेका हुन् । दुई दलबीचको तालमेल अनुसार वडामा पनि अध्यक्ष र सदस्यहरू मिलाइएको छ ।
हतुवागढी गाउँपालिका अध्यक्षमा मदन खुलाल
हतुवागढी गाउँपालिकामा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र समाजवादी फोरमबीच कार्यगत एकता गरिएको छ ।
यस गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवार कांग्रेसबाट मदन खुलाललाई बनाइएको छ । उपाध्यक्षको उम्मेदवार भने माओवादी केन्द्रबाट सुनिता राईलाई बनाइएको छ ।
‘हामीलाई चाहिँ वडा तहमा समेट्ने सहमति भएको छ,’ समाजवादी फोरम भोजपुर जिल्ला अध्यक्ष राईले भने, ‘जहाँजहाँ हाम्रो पकड राम्रो छ त्योत्यो वडामा समाजवादी फोरमबाट अध्यक्षको उम्मेदवार बनाइँदैछ ।’
रामप्रसाद राई गाउँपालिकामा दिनेश कार्की
रामप्रसाद राई गाउँपालिकामा भने कांग्रेस र समाजवादी फोरमबीच तालमेल गरिएको छ ।
यस गाउँपालिकाको अध्यक्ष कांग्रेसलाई दिइएको छ भने उपाध्यक्ष समाजवादी फोरमलाई दिइएको छ । कांग्रेसले दिनेश कार्कीलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ भने समाजवादी फोरमले लक्ष्मी राईलाई अघि सारेको छ । वडा तहमा पनि दुई दलबीच कार्यगत एकता गरिएको छ ।
आमचोक गाउँपालिका र अरुण गाउँपालिकामा भने समाजवादी फोरम एक्लै चुनावी मैदानमा छ ।
आमचोक गाउँपालिकामा दिपेन्द्र राईलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ भने अरुण गाउँपालिकामा झिल खिम्बूले अध्यक्षको उम्मेदवार भएका छन् । दिपेन्द्र राई पार्टी जिल्ला समिति सदस्य हुन् भने झिल खिम्बुले समाजवादी विद्यार्थी फोरमका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
यसैगरी भोजपुर नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार पनि टुंगो लगाइएको जिल्ला अध्यक्ष राईले बताए । आप्mनो पार्टीको तर्फबाट मेयरमा अर्जुनकुमार राईलाई उम्मेदवार बनाइएको उनले बताए ।
आमचोक गाउँपालिका, अरुण गाउँपालिका र भोजपुर नगरपालिकाको उपाध्यक्ष तथा उपमेयरको उम्मेदवार भने बुधबार (१७ जेठ)सम्ममा टुंगो लगाइने बताइएको छ ।
यता षडानन्द नगरपालिकाको उम्मेदवार पनि टुंगो लगाउन बाँकी रहेको छ । नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र समाजवादी फोरम दुई पार्टी बसेर मंगलबार साँझसम्ममा उम्मेदवार टुंगो लगाइनेछ ।
नयाँ शक्ति र समाजवादी फोरम हाल एउटै चुनाव चिन्ह ‘मलास’ लिएर चुनावमा भाग लिदैछन् ।
दुई पार्टीबीच एकता हुने निश्चित भएकाले तालमेल भएका ठाउँमा नयाँ शक्तिका कार्यकर्ताहरूले समाजवादी फोरमका उम्मेदवारलाई सघाउनेछन् ।
पौवादुङमा गाउँपालिकामा पनि कसकसलाई उम्मेदवार बनाउने ? भन्ने विषय टुंगो लगाइएको छैन । संगठन कमजोर भए पनि पौवादुङमामा उम्मेदवार खडा गर्ने समाजवादी फोरमले जनाएको छ ।
संविधान संशोधन नभए स्विकार्न सकिदैन र संविधान खारेजीको मुद्धा अघि बढ्न सक्छ: अध्यक्ष यादव
ओखलढुंगाको सिद्धिचरणमा नवराज गुरुङको मेयरमा उम्मेदवारी
Posted by admin on May 31 2017. Filed under Breaking News, राजनीति. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leavearesponse or trackback to this entry